မင်္ဂလာပါ နည်းပညာစမ်းသပ်နေသည် သီးခံပါ
မဖတ်ချင် မရေးချင်ဖြစ်နေတဲ့ CD/DVD Drive တွေကို ဘယ်လို ပြင်မလဲ
Drive တွေဟာ အသုံးပြုတာ
ကြာလာတာနဲ့အမျှ အခွေရွေးတာ၊ သိပ်မရေး သိပ် Read more »
Blog ရေးနည်း အပြည့်အစုံပါ။
မိမိမှာ Gmail Account တစ်ခုရှိပြီး၊ မြန်မာလိုစာစီနိုင်ရန်အတွက် ZawGyiFont ကိုလည်း Install ပြီးခဲ့ပြီဆိုရင် Blog တစ်ခုကို စတင်ဖန်တီးနိုင်ကြပါပြီ။ Blog တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ရန် လုပ်ဆောင်ရမည့် အဆင့်များကိုဖော်ပြပါ ခေါင်းစဉ်များဖြင့် ဖော်ပြသွားပါမယ်။
Download Window 8.1 Pro and it's RTM Activator
Window 8.1 Pro အတွက် ဖူးဗားရှင်းအက်တီဗိတ်လုပ်နည်းကို လိုအပ်သောပုဂိုလ်များအတွက်တင်ပေးလိုက်တယ်။
Window 8 Pro နဲ့ Window 8.1 Pro ထူးခြားတာက Start Menu Bottom ပါလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Window 8 Pro
ကိုပဲသုံးမယ်ဆိုရင် Start Menu Bottom အတွက်သီးသန့် Start Menu X ကိုတင်ပြီးမှအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Window 8.1 ကို အင်တာနက်ကနေ Upgrade လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် Control Panel > Store ကနေလုပ်လိုက်ရုံပါ
ပဲ။ ဒါကတော့ လက်ရှိ Window 8 ကိုအသုံးပြုသောသူများအတွက်ပေါ့။ အင်တာနက်စပိဒ်မကောင်းရင်တော့ Window Installation ကိုပြန်လုပ်တာအကောင်းဆုံးပဲ။ ဒါကြောင့် အဲဒီ Window 8.1 Pro လိုအပ်သောပုဂိုလ်အ
Download Window 8.1 Pro :
Download Activator :
ကွန်ပြူတာ admin password မေ့သွားလျှင်
Windows 8 အသုံးပြုသူများအတွက် Zawgyi-One Font အသုံးပြုနည်းဖြစ်ပါတယ်…။ အရင်ဦးဆုံး Zawgyi Font and Zawgyi typing Keyboard မရှိသေးသူများ ကျနော်အောက်မှာပေးထားတဲ့ Links လေးတွေကနေ အရင်းဆုံးဒေါင်းလုပ်ယူလိုက်ပါ…။ ပြီးရင် Zawgyi-One Font ကိုInstall လုပ်ပါ…. Zawgyi typing Keyboard ဖိုင်ကိုဖွင့်ပြီး Setup ဆိုတာလေးကို Install လုပ်လိုက်ပါ...။ ပြီးရင် ဒုတိယဖိုင်ထဲက IEZawGyiGtalkfont ဆိုတာကို install လုပ်ပါ....။ အဲဒါတွေက ပထမအဆင့်ပါ… ဒုတိယအဆင့်က Control Panel ထဲဝင်ပြီး Language Setting ကိုပြင်ရပါမယ်…။ Read more »
Apple က DVD Drive ကို ဖယ်ရှား
သည် ၄င်း၏ Macbook Air နှင့် Mac Mini ကွန်ပျူတာ များ၌ သိသာ ထင်ရှားစွာ ပိုမို မြန်ဆန်သည့် Processor များနှင့် ပိုမို စွမ်းအား ကောင်းသည့် ဆောင်ရွက်မှု များကို တိုးချဲ့ ဖန်တီး မှုများ အပါအဝင် ၄င်း၏ Feature အသစ် မြောက်မြား စွာကို ထုတ်ဖော် ပြခဲ့ ကြောင်းနှင့် ၄င်း ကွန်ပျူတာ
Wireless Router ကနေ website တွေကိုပိတ်နည်း
Router ထဲကနေ မိမိတို့ ရုံးမှာ မကြည့်စေချင်တဲ့ website တွေကို အလွယ်တစ်ကူ
ပိတ်တဲ့ နည်းပါ။ ဒီနည်းက တော်တော်များများလည်းသိ့ကြမှာပါ။ မြန်မာမိသားစု မှာ အစ်ကိုတစ်ယောက် တင်ပေးထားတာလည်း တွေ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မသိ့သေးတဲ့သူတွေအတွက် ကျွန်တော် အခု့Cisco Linksys E3000
အမျိုးအစားနဲ့ လုပ်ပြပါမယ်။ တစ်ခြား D Link wireless router တွေမှာလဲ တော်တော်များများရပါတယ်။ တစ်ခြားတော့ မစမ်းဖူးဘူးဗျ ။ ကိုယ့်ရဲ့ network ထဲမှာ မကြည့်စေချင်တဲ့ website တွေကို ဘန်းတဲ့ နည်းကတော့ အများကြီးရှိပါတယ။
software တွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ (eg: Internet Lock , Child Control)
နောက်တစ်ခု Proxy Server တွေထိုင်ပြီးတော့လဲ ဘန်းလို့ ရပါတယ်။ (eg: ISA, Squit, Ipcop) အများကြီးပါဗျာ နောက် Port တွေ လိုက်ပိတ်ထားမယ် ။ ဘာညာပေါ့ ။
အသေးစိတ်ကိုတော့ နောက်မှပေါ့ .. အခုလောလောဆယ် Cisco Linksys E3000 ကို စပြီး configure လုပ်ပြပါမယ်။
(1) ပထမဆုံးကတော့ Browser ကနေ Router ရဲ့ ip ကိုရိုက်ပြီး Router ထဲကိုဝင်ရပါမယ်။ အဲဒီမှာ သတိပြုစရာတစ်ခုက Browser မှာ no proxy ဖြစ်နေရပါမယ်။ Authentication Required ဆိုတဲ့ box ကျလာရင် user name နဲ့ password ရိုက်ပြီး router ထဲကို ၀င်လိုက်ပါ။
မဖတ်ချင် မရေးချင်ဖြစ်နေတဲ့ CD/DVD Drive တွေကို ဘယ်...
မိမိမှာ Gmail Accoun...
Download Window 8.1 Pro and it's RTM ActivatorLabe...
ကွန်ပြူတာ admin password မေ့သွားလျှင် <!--more--...
Apple က DVD Drive ကို ဖယ်ရှားApple သည် ၄င်း၏ Macbo...
Wireless Router ကနေ website တွေကိုပိတ်နည်း ...
Microsoft Security Essential software free downloa...
Wi-Fi လွှင့်နည်းများအိမ်တွင်း၊ရုံးတွင်းအတွက် Wi-Fi ...
☆☆☆ဂျီတော့ မှာ မိမိနာမည်နဲ့ ဆိုင်းထိုးမယ်☆☆☆ ဂျီေ...
blog ဖွင့်လိုက်ရင်ခေါင်းလောင်းသံ တိုးတိုးလေးကြားချ...
ကွန်ပြူတာPC တစ်လုံး တပ်ဆင်တော့မယ်ဆိုရင်....PC တစ်လ...
ကွန်ပျူတာ (Hardware) ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ခြင်း ...
အင်အား. Template images by RBFried. Powered by Blogger.